Walitti bu’iinsa Najjoo fi Mandiitti ta’een lubbuun darbe – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsWalitti bu’iinsa Najjoo fi Mandiitti ta’een lubbuun darbe
Kaleessa godina wallaga lixaa aanaa Mana Sibuutti humna waraanaa ABO fi kora bittinnessaa Oromiyaa gidduutti walitti dhukaasuun akka ture jiraattotni naanichaa BBC tti himan.
Humna waraanaa ABO keessas namni tokko du’uu dhagahameera.
(bbc)—-Galgala gara sa’aatii 12 magaala gidduutti dhukaasni kan biraa ta’e. dhukaasumatu lafa bobeesssa namni deemuu hin danda’u. namni akkuma jirutti ala ture anuu karaarran ture akkattin itti mana gahe waan biraadha” jechuun haala magaalittii guyyaa Kaleessaa jiraatan magaalitti maqaan isaa akka hin dhahamne gaafate himeera.
Galgala sana magaalaan hedduu goolamee gara sa’aa lamatti humni raayyaa ittisa biyya konkolaataa Afuriin magaalitti to’achuuf galuu isaaniis dubbaniiru.
Dhukaasa kana keessa jiraataan magaalichaa Taklee Toraa ajjeefamuus jiraattan magaalichaa dabalanii himaniiru. Namootni lamas madawanii hospitaal Mandii akka jiranis dubbataniiru.
”Dhukaasa dhuka’aa jiru keessa suuqiisaa osoo cufachaa jiruu suuqiisaa balbal duratti ajjeefame,” jedhaniiru.
Sababa maaliin dhukaasni kun maagaala Mandii keessatti akka eegale gaafannee homaa wanti beekan akka hin jirres dubbatu.
”Namni waan tokko dubbatu kan jeequmsa kaasus hin jiru. uummatni nagaadhuma magaala keessa deemaa ture. oduudhumti rakkoon jira jedhu Mandiirraa sa’aatii 5 fi 6 fagaata” jechuunis haala ture ibsaniiru.
Dhukaasa magaalaa manditti gaggefamaa ture tasgabeessuuf karaa najjoo humni dabalataa galuu kan arganii fi dhagahan jirattotni magaalaa najjoo fi naannoshees guyyaa har’aa mormii dhagessisaa oolaniiru.
”Korri bittineesaa Oromiyaa jiraattota magaalaa Mandiirratti dhukaasa banuusaa mormuuni kan hirrira baane” jedha dargaggoon magaalaa Najjoo hiriira mormii san irratti qooda fudhate.
Korri bittineessaan Oromiyaa magaalaa mandii keessatti uummata nagaa irratti dhukaasa bananuun nama tokko ajjesuun namoota lama biroos madeessuu jiraataan magaalitti kan biroon himaniiru.
uumatni magaalaa Mandii wayita miseensonni Kora Bittineessaa magaalitti seenan karaatti bahee ilaala akka tures dubbatu.
”korri bittineesaa akka waan madoo baatee galee fi uummati kaanaf gammachuu isaanii ibsachuuf bahaniitti hubachuun ija aariitiin uummata irratti dhukaasa roobsanis” jedhu jiraataan kun.
ka’uumsi dhukaasa kanaa walitti bu’iinsa gidduu magaalaa Waamaa fi Caalaa jedhaman gidduutti Waraana Bilisummaa Oromoo fi kan kora bittineessaa giddutti uumame akka ta’e itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenya magaala Mandii Obbo Kabbadaa Dilaalaa himaniiru.
walitti bu’iinsa sanaan loltuun miseensa WBO ajjeefamuu fi korri bittineessaa magaala Mandiitti deebi’uus himaniiru.
odeeffannoo jiruun miseensota poolisii kana irratti aggaamiin gaggeefamee jennaan ofirraa qolatan waan jedhutu jira” jechuun dhukaasni magaala mandii keessatti baname akkamiin akka eegale Obbo Kabbadaan himaniiru.
Dhukaasa tureen daladalaan magaalichaa Taklee Toolaa jedhamu konteenara isaa keessatti ajjefamuus himaniiru. Rasaasa eenyuun akka ajjeefame akka hin qulqulleefannes dubbataniiru.
Guyyaa kaleessaa dargaggoon walgurmeessanii daandii cufuufii sagalee dhageesisuu eegaluus dubbataniiru.
”Gaaffii dargaggoota kanaan hoogganaan poolisii aanaa Mana Sibuu Fikruu Tufaa uummata irratti dhukaasa banan jedhame to’annoo jala olchineerra” jedhaniiru.